China Yakasarudzika Embroidery Set DIY Yakagadzirwa nemaoko Sewing Craft Embroidery Kits kune Anotanga 511101-511113 Mugadziri uye Mutengesi | Koshesa
Yakasarudzika Embroidery Set DIY Yakagadzirwa nemaoko Sewing Craft Embroidery Kits yeKutanga 511101-511113
Hot-kutengesa Chinese chimiro zodiac (mbeva, mombe, tiger, tsuro, dhiragoni, nyoka, bhiza, hwai, tsoko, huku, imbwa, nguruve). Shinda Yakarukwa Yakashongedzwa DIY Yakashongedzwa Kit Ine Plastiki Hoop shandisa ruoko - rakagadzirwa nemativi-matatu ekushongedza, rega ruoko ruite kuratidza mafungiro ako. Micheka yemhando yepamusoro, kududzira kwepamusoro, kugadzirwa kuri nyore.
Yakananga Kutengesa Ruva Kushongedza DIY Yakashongedzwa Kit Needlework Embroidery Kit.
Kumba Kwekushongedza Zvinhu. Embroidery DIY matatu-emhando yekushongedza inogona kusungirirwa pamadziro eimba yekugara, imba yekudyira, yekurara, kudzidza, kune rusvingo rusina chinhu kuti utaure yakasarudzika nyaya, yakashata handcraft, rega hupenyu hwako huwedzere maitiro, inogona zvakare kutumira shamwari, hama,
yakaitwa nemaoko, kuratidzwa kwemoyo, kutsigirwa kwezvakanaka.
Iyo kit iine
1.Professional nezvakarukwa tsono
2.suffuit inoenderana yekushongedza tambo
3.micheka yakadhindwa inogona kubviswa
Sarudza yepamusoro-soro antibacterial cotton, uchishandisa tekinoroji yepamusoro, inogadzirwa kuburikidza nemaitiro mazhinji. Hazvisi nyore kudzima, kwete nyore kuputswa, kupfeka-zvinoramba zvinhu.
Mucheka wakanaka wedonje. Iyo machira mune akatsetseka, akasimba uye ane ganda-ane hushamwari. Zvakareruka uye zvinonakidza, zvichipa chigunwe kubata kwakasununguka.
Tsika dzakashongedzwa tsono, iyo yepamusoro mushure mekugadzirwa kwakasarudzika, yakasimba, isiri nyore kuremara. Musoro wedenderedzwa wakagadzirwa kuti uchengetedze minwe yako.
zvishongo zvekushongedza zvinotorwa kubva mumvura inogadziriswa pigments. Musono usati wapera, edza kusabata jira nemvura. Mushure mekushongedza kwapera geza jira nemvura uye trace yekushongedza ichanyangarika.
Chigadzirwa Embroidery kits
Muenzaniso Nha gonzo, mombe, ingwe, tsuro, dhiragoni, nyoka,
bhiza, hwai, tsoko, huku, imbwa nenguruve
Kukura / Kurema 4inch
MOQ 50sets (Dhizaini inogona kuiswa)
Kushandisa Kushongedza Kwepamba, chipo
Kurongedza Imwe yakaiswa mune kraft bepa, nezvakarukwa zvepurasitiki
Sevhisi Yemahara sampuro, 24h online, yakagadzirirwa dhizaini
Pashure: MutengoList yeCross Stitch Chinyorwa - Muchinjikwa Wakatambanudza Cotton Thread Mushinda Cotton Ruvara Cotton Embroidery Thread 981457A - Yiwu Embroidery
Direct Sale Plant Kushongedza Nemaoko Sewing Kr ...
Zvakananga Kutengesa DIY Craft Zvirimwa Embroidery Set Pla ...